Ezona zibonakaliso zasimahla zeCrypto zikaJuni 2022 kunye neNdaba zeCrypto | cryptosignals.org
Ezona ziqonga zeNtengiso zeCrypto
Yintoni iNtengiso ye-Crypto kwaye kutheni kufuneka uyithengise? Isikhokelo saBaqalayo
AmaQela eTelegram amaNgcaciso aPhambili eCrypto-Isikhokelo esipheleleyo
Ezona ndawo ziBalaseleyo ze-Crypto
Abarhwebi beBitcoin abaGqwesileyo
Abarhwebi base Ethereum abagqwesileyo
Indlela yokuthenga uphawu lweNgqwalasela oluSisiseko
Indlela yokuthenga iSolana
Uwusebenzisa njani uMgangatho
Indlela yokufunda izibini
Ubeka njani urhwebo
Funda ukuba ungathengisa njani i-Crypto
Funda ukuSwitzerland Trade Crypto
Zithini iiCrypto Pips
Thenga i-Crypto ngeKhadi letyala
Thenga i-Crypto ngeKhadi lokuTsala
Joyina iqela lethu le-VIP yocingo
Idiphozithi ye-250 yeedola kunye ne-eToro ukufumana ukufikelela kubomi bonke kwiimpawu zethu zeVIP
Fumana Iimpawu zeVIP Mahala!
Ukurhweba amawaka eeCFD Ukurhweba amawaka eeCFD
Eyona imiqondiso ilungileyo ye-Crypto 2022
ICryptoSignals.org liqela labarhwebi abaqeqeshwe kakhulu abathe bathengisa kwimarike ye-cryptocurrency ukusukela ngo-2014
Sithathe isigqibo sokwenza indawo yoluntu yocingo ukuze abanye bafunde kwiimpawu zethu ezichanekileyo zedijithali.
Joyina iTelegram yethu yasimahla
Vula iMiqondiso yeDijithali yemihla ngemihla
Joyina wethu Iqela le-VIP ngokukhetha iphakheji engezantsi ekulungeleyo, sinikezela ngeentsuku ezingama-30 zokubuyisela imali ukuze kungabikho nto ilahlekileyo ngokuzama uphawu lwe-cryptocurrency ekumgangatho ophezulu.
Ithunyelwe ngenyanga £ 42
2-3 Iimpawu mihla le
Ireyithi yokuphumelela engama-82%
Ukungena, Thatha iNzuzo kunye nokuMisa ukulahleka
Imali kwiNgozi ngoRhwebo ngalunye
Umngcipheko Umvuzo weRatio
Okudume kakhulu Ithunyelwe Quarterly £ 78
Ithunyelwe IBI-NGONYAKA £ 114
Ithunyelwe ngonyaka £ 210
KHETHA I-BROKER EBALULEKILEYO KWILIZWE LAKHO
Yiba ngumrhwebi oqeqeshiweyo!
Vula iakhawunti ngomnye umthengisi wethu. Kwaye ufumane ukufikelela kubomi bethu Iimpawu zeVIP Crypto simahla! Bhalisa kwaye udipozithe ubuncinci be-250 $ nge-Crypto broker yethu ekhethiweyo engezantsi.
I-eToro liqonga leeasethi ezininzi elinikezela ngotyalo-mali kwi-Forex, kwiiSitokhwe, nakwii-Cryptocurrensets, kunye nokuthengisa iiasethi zeCFD. Ii-CFDs zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye ziza nomngcipheko omkhulu wokulahleka kwemali ngokukhawuleza ngenxa yokufumana amandla.
Ii-CFDs zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye ziza nomngcipheko omkhulu wokulahleka kwemali ngokukhawuleza ngenxa yokufumana amandla. I-71.2% yeeakhawunti zabatyali mali zentengiso zilahlekelwa yimali xa kuthengiswa iiCFD kunye nalo mboneleli.
Ukuya kuthi ga kwi-500: 1 i-leverage, ukurhweba ngamawaka e-CFD kunye nezixhobo zokuPhucula ezikhoyo. I-Indices, i-FX, i-Crypto kunye nokunye kwindawo enye. Sihamba umgama owongezelelweyo ngokubonelela ngojongano olusebenziseka lula kunye neempawu ezintsha.
Joyina uZethu Iqela leTelegram yasimahla
Sithumela imiqondiso emi-3 yeVIP ngeveki kweyethu Iqela leTelegram yasimahla, umqondiso ngamnye uza nohlalutyo olupheleleyo lobuchwephesha malunga nokuba kutheni sithatha urhwebo kunye nendlela yokulubeka kumthengisi wakho.
Fumana incasa yento eliliqela leVIP ngokujoyina ngoku SIMAHLA!
Joyina iTelegram yethu yasimahlaFunda malunga neMiqondiso yethu
Ikhaya leMpawu eziPhezulu zeBakala zeCrypto
Zisiwe ngqo kwaWe I-App yeTelegram ngexesha elililo!
Iqela lethu labarhwebi abasebenza ezindlwini e-CryptoSignals.org bavavanye iimakethi ze-crypto ngeenxa zonke ukuze unganyanzelekanga. Ngokudibanisa uhlalutyo olunzulu lobuchwephesha, ii-algorithms ze-AI, kunye nophando olusisiseko-CryptoSignals.org ihlala ikhangela amathuba okuthengisa amalungu ethu.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukusindwendwela, sivumele ukuba sichaze ukuba senza ntoni apha CryptoSignals.org
FUNDA IIMVAVANYO ZAMVA KWIINCWADI ZETHU ZOBUGCISA NEZESEKO
Iinkunzi zeCompound (COMPUSD) Zityhalela phezulu iMarike ngeQhinga lokuZimanya
I-Bitcoin Cash (i-BCH / i-USD) Ixabiso lihamba emacaleni kwindawo ephantsi
Iinkunzi zePolkadot zikhusela i-$ 6.3 yenkxaso njengoko ilwa ne-$ 8.27 High
I-Solana isungula iBlockchain kunye ne-Web3-ehambelana ne-smartphone, iSaga
I-Synthetix (i-SNXUSD) iLurks kwiNgingqi ye-Overbought.
I-Bancor (BNTUSD) Iibhere zijolise kwiNqanaba leNkxaso ye-0.150 yeedola
I-Bitcoin iba lula ukuyifumana njengobunzima bezeMigodi behla nge-2.35%
Uniswap (UNI/USD) Ixabiso lokuzabalaza, Ukujikela kwi-Avareji ye-6 yeedola
I-Ripple Ibamba ngaphezulu kwe-0.30 yeedola njengeBulls ekujoliswe kuyo kwi-0.38 yeedola
I-Binance Coin yehla ukuya kuPhantsi lwangaphambili njengoko abathengi bavela kwi-$ 207 ephantsi
I-DeFi Coin Price Prediction: DEFC/USD Trades Near $0.13 Resistance
I-Lucky Block Price Prediction: I-LBLOCK / i-USD Ranges malunga ne-Avareji ehambayo
Ukuphumelela kwethu kweDijithali yemali
IQela leQela leVIP
Ukuba umtsha kwimakethi ye-cryptocurrency kwaye ungathanda ukufunda indlela yokuthengisa ngayo, lawula umngcipheko ngokuchanekileyo kwaye ufumane iakhawunti yakho yorhwebo ukuba ibe yinzuzo emva koko ubone okungaphezulu malunga noko sikunika ngezantsi.
Sijonge ukufezekisa iipips ezili-1500 ngenyanga ngenyanga ngokuthengisa i-Bitcoin kuphela!
Urhwebo ngalunye luza nohlalutyo olupheleleyo lobuchwephesha, ucacisa ukuba kutheni sithatha urhwebo, sikwenza oku ukuze ufunde njengoko uthengisa.
UMNGCIPHEKO WOMVUZO WOMVUZO
Sichaza ngokucacileyo iRRR (umngcipheko womvuzo) ngomsebenzi ngamnye kunye nokusebenza kwi-1: 2 & 1: 3 ratio ukuze ungaze ubeke umngcipheko kakhulu kurhwebo ngalunye kwaye ube nethuba eliphezulu lokwenza inzuzo.
Iimpawu zethu zithunyelwa kuphela ngeTelegram, ngaloo ndlela ngokukhawuleza xa umqondiso ufika, ufika ngokukhawuleza kuwe.
Ngokujoyina iqela lethu le-VIP uvula ubutyebi bolwazi kunye namava kubarhwebi bethu, intlawulo encinci yenyanga kuthetha ukuba ujoyina i-ELITE
Urhwebo lwethu alusoloko lusenziwa kwimarike, ke uya kuba nexesha elininzi lokukhwela nabo, sijikisa urhwebo, isikhumba sentloko kwaye sisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezinje nge-BUY STOPS, Sell STOPS & BUY LIMIT njl.
Joyina iqela lethu lasimahla leTelegram
Sithumela imiqondiso ye-3 VIP ngeveki kwiqela lethu lasimahla leTelegram, uphawu ngalunye luza nohlalutyo olupheleleyo lobuchwephesha malunga nokuba kutheni sithatha urhwebo kunye nendlela yokuyibeka kumthengisi wakho.
Isebenza njani imiqondiso yethu ye-Crypto
Ukuba umtsha ngokupheleleyo kwihlabathi leempawu ze-crypto, sivumele ukuba siqhekeze izinto ezisisiseko kwiiMeko zikaLayman.
Owona mgaqo uphambili weempawu ze-crypto kukuba uya kufumana ingcebiso ngorhwebo. Oku kuyakufika ngexesha lokwenyani nge
yocingo -Ngoko awusoze waphoswa lithuba lokuthengisa elinokubakho. Umqondiso ngamnye weqela CryptoSignals.org ukuthumela kuya kuba neseti yolwazi olubalulekileyo. Olu lulwazi olukuxelela ukuba ungazuza njani kwimiqondiso yethu ngokubeka ifayile ye-
ii-odolo ngokwawo kumthengisi okhethiweyo. Ukukunika umbono wento a CryptoSignals.org Isiginali ye-crypto ijongeka njengokujonga umzekelo LTC / USD ngezantsi:
Njengoko ubona koku kungasentla, eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto kufuneka ihlale inamanqaku amahlanu edatha. Esi sisibini se-crypto uqobo - kulo mzekelo, yi-LTC / USD. Uya kubona ukuba umqondiso ucacisa ukuba uhambe ixesha elide-oko kuthetha ukuba umhlalutyi wethu wasendlwini ucinga ukuba esi sibini siza kunyuka ngexabiso. Eyona nto ibaluleke kakhulu, eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto nayo kufuneka ize nomda ofunekayo, ukulahleka kokuyeka, kunye namaxabiso e-oda yenzuzo. Ukuba umtsha kula magama aphambili kurhwebo, kungcono ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo kokuthethwa koku ngaphambi kokuba ubhalisele inkonzo yomqondiso we-crypto.
Ukunceda ukucoca inkungu, sichaza la manqaku aphambili edatha ngeenkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi.
KUFUNEKA IJONGE KANJANI EYONA IMIBONISO YECRYPTO?
Nalu ulwahlulo lwendlela ezona mpawu zibalaseleyo ze-crypto ekufuneka zijongeka ngayo-kwaye kuthetha ntoni kwikota nganye.
Le ichaza kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, iya ngaphandle kokuthetha ukuba kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi na imiqondiso yethu enxulumene nayo. Kuya kufuneka siqaphele ukuba abahlalutyi bangaphakathi kwiCryptoSignals.org bagxile kuluhlu olubanzi lweemarike ze-cryptocurrency. Ayisiyi kuphela ukubandakanya i-crypto-to-fiat, kodwa ngababini be-crypto-to-crypto, nayo. Kulabo abangaziyo, isibini se-crypto-to-fiat siya kuba nemali enye yedijithali efana neBitcoin kunye nemali enye ye-fiat efana nedola yaseMelika. Kulo mzekelo, isibini siya kumelwa njenge-BTC / USD. Ngesiqhelo, esi sesona sithengiso sithengisa kakhulu kwimizi-mveliso kunye neebhiliyoni zeedola ezitshintsha izandla mihla le. Ngale nto engqondweni, uninzi lweempawu ze-crypto ozifumanayo kuthi, uCryptoSignals.org uya kugxila kule marike. Nangona kunjalo, abathengisi bethu banolwazi oluninzi ngokurhweba ngeendlela ezahlukeneyo zokubambisa nge-crypto-to-crypto. Oku kubandakanya ukuthandwa kwe-BTC / ETH-ethetha ukuba sithengisa ngenqanaba lotshintshiselwano phakathi kweBitcoin ne-Ethereum. Esinye isibini se-crypto es ...
Mde okanye mfutshane
Imetrikhi eyongezelelweyo eyongezelelweyo enyanzelekileyo kwisithuba semiqondiso ye-crypto sisikhokelo sentengiso. Ngamanye amagama, ngaba kufuneka uhambe ixesha elide okanye elifutshane kurhwebo? Ngaphandle kolu lwazi, umqondiso we-crypto uya kuba lilize. Kulabo abangaziyo: Ukuba isiginali yethu ye-crypto ikuxelela ukuba uhambe ixesha elide, oku kuthetha ukuba sicinga ukuba isibini siza kunyuka ngexabiso Ukuba isiginali yethu ye-crypto ikuxelela ukuba uhambe ngokufutshane, oku kuthetha ukuba sicinga ukuba isibini siza kuncipha ngexabiso Ukucacisa ngakumbi: Ukuba isiginali ye-crypto ikuyalela ukuba uhambe ixesha elide, kuya kufuneka ubeke i-oda yokuthenga kwi-crypto broker oyikhethileyo Ukuba, nangona kunjalo, uphawu lwe-crypto lukuxelela ukuba uhambe mfutshane, emva koko kufuneka ukhethe i-oda yokuthengisa Iqela lethu Abahlalutyi kwi-PipSignals bakhululekile ukuhamba ixesha elide kunye nokufutshane kwiibini ze-crypto. Ngokubalulekileyo, akukho nto incamathayo ngokweemvakalelo kwimali yedijithali efanelekileyo esiyithengisayo. Endaweni yoko, eyona njongo yethu iphambili kukwenza inzuzo ngesikhundla. ...
Limit Order Ixabiso
Sukuyenza impazamo ngayo-eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto iya kuhlala iza nexabiso loku-odola elifunekayo. Ukuba umtsha kurhwebo, ngokubanzi unokhetho ezimbini xa kufikwa ekungeneni kwintengiso. Ngokuzenzekelayo, uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi bakubuza ukuba uyafuna na ukubeka 'iodolo yentengiso'. Oku kuthetha nje ukuba umrhwebi uza kuqhuba urhwebo lwakho kwangoko-kwixabiso elilandelayo elilandelayo. Nangona oku kulungile kutyalo-mali lwexesha elide, ayilufanelanga urhwebo lwe-crypto lwexeshana elifutshane. Kungenxa yokuba umngcipheko omkhulu wokungena kurhwebo ngexabiso elithile-ngokophando olwenziweyo olwenziwe. Umzekelo, masicinge ukuba thina kwiCryptoSignals.org sithengisa i-BTC / i-USD-exabiso layo ngoku li- $ 49,500. Iqela lethu labahlalutyi abangaphakathi endlwini linokujonga kubuchwephesha kwaye ligqibe kwelokuba iBTC / i-USD yophule i-50,000- emva koko kufuneka kuthathwe indawo ende. Ukuqinisekisa ukuba singena kuphela ngexabiso elingaphezulu kwe- $ 50,000- hayi i-curren ...
Ixabiso le-Order-Loss Order
Ukuza kuthi ga ngoku, simisele ukuba ezona phawu zibalaseleyo ze-crypto ziya kukuxelela ukuba yeyiphi na isibini oza kuthengisa, nokuba kuya kufuneka uhambe ixesha elide okanye elifutshane, kwaye leliphi ixabiso lokungena ekufuneka usete kulo umda. Nangona kunjalo, esi sisiqingatha semfazwe. Emva kwayo yonke loo nto, ukuze uthengise ngendlela ebeka emngciphekweni, kuya kufuneka ube nesicwangciso sokungena endaweni. Kwakhona, thina kwiCryptoSignals.org siqinisekisa ukuba unalo lonke ulwazi oludingayo lokufumana inzuzo kwiimpawu zethu zekhompyuter- yiyo loo nto sihlala sikunika ii-odolo zokuyeka kunye nengeniso. Ngokumalunga nelahleko yokumisa, esi sisixhobo solawulo lomngcipheko esiqinisekisa ukuba asilahlekelwa yimali eninzi kurhwebo- ukuba ayizukuya kwisicwangciso. Oku kubalulekile, nangona sinerekhodi ekudala ikho yokwenza intengiso ye-crypto-asibangi kuphumelela urhwebo ngalunye. Ngokuchasene noko, kuya kuhlala kukho ukulahleka kwemisebenzi. Ngale nto engqondweni, sicebisa ixabiso elifanelekileyo lokuyeka ukulahleka ekufuneka ulisebenzise xa usenza imiqondiso yethu ye-crypto. Kwi cr ...
Ixabiso lokuThatha iNzuzo
Kukho enye into ebaluleke ngakumbi yolwazi eya kuthi ikunike eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto-kwaye elo lixabiso elicetyiswayo lokuthatha inzuzo. Oku kusebenza ngokufanayo nomyalelo wokulahleka kokuyeka, kodwa endaweni yokunciphisa umngcipheko wethu, uya kufuna ukuvala inzuzo yethu kurhwebo. Kumzekelo esiwunike ngaphambili, siqaphele ukuba ixabiso loku-ngenisa inzuzo elicetyiswayo yi- $ 238.74. Oku kuhlala kwi-3% ngaphezulu kwexabiso lokucetyiswa komda we-231.79- oko kuthetha ukuba sifuna ukwenza i-3% kulomqondiso othile we-crypto. Kwakhona, ukuba ixabiso lokuthatha inzuzo lingqinelana nemarike - i-crypto broker ekuthethwa ngayo iya kuvala ngokuzenzekelayo urhwebo. Kananjalo, sinokutshixa kwiingeniso zethu ngaphandle kokufuna ukuhlala kwisixhobo sethu ukuze siphume ngesandla.
Umngcipheko vs Umvuzo
Ukuqhubela phambili ukusuka kweli candelo lingentla malunga nokuyeka-ukulahleka kunye ne-odolo zenzuzo, iqela lethu labahlalutyi kwi-CryptoSignals.org liya kuhlala linomngcipheko / umyinge womvuzo xa uthumela imiqondiso ye-crypto. Kumzekelo ongentla, umngcipheko wawuyi-1% -kuba lelo xabiso lethu lokuphosa ilahleko lacetywayo. Inxalenye yomvuzo we-equation yayiyi-3% -ngoko kulapho sibeke khona iodolo yethu yokuthatha inzuzo. Ngokubalulekileyo, uninzi lweempawu ze-crypto esizithumelayo ziya kulandela i-1/3 yomngcipheko / yomvuzo. Ngamagama alula, oku kuthetha ukuba sibeka emngciphekweni i-1% yenkunzi yethu ukuze sizuze i-3%. Ngokwenza njalo, kufuneka kuphela ukuba sibe nentengiso enye ephumeleleyo kwezintathu zonke ukuze senze inzuzo.
Le ichaza kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, iya ngaphandle kokuthetha ukuba kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi isignali enxulumene nayo.
Kuya kufuneka siqaphele ukuba abahlalutyi bangaphakathi kwiCryptoSignals.org bagxile kuluhlu olubanzi lweemarike ze-cryptocurrency. Ayisiyi kuphela ukubandakanya i-crypto-to-fiat, kodwa ngababini be-crypto-to-crypto, nayo.
Kulabo abangaziyo, isibini se-crypto-to-fiat siya kuba nemali enye yedijithali efana neBitcoin kunye nemali enye ye-fiat njengeDola yaseMelika. Kulo mzekelo, isibini siya kumelwa njenge-BTC / USD.
Ngesiqhelo, esi sesona sithengiso sithengisa kakhulu kwimizi-mveliso kunye neebhiliyoni zeedola ezitshintsha izandla mihla le. Ngale nto engqondweni, uninzi lweempawu ze-crypto ozifumanayo kuthi, uCryptoSignals.org uya kugxila kule marike.
Nangona kunjalo, abathengisi bethu banolwazi oluninzi ngokurhweba ngeendlela ezahlukeneyo zokubambisa nge-crypto-to-crypto. Oku kubandakanya ukuthandwa kwe-BTC / ETH-ethetha ukuba sithengisa ngenqanaba lotshintshiselwano phakathi kweBitcoin ne-Ethereum.
Esinye isibini se-crypto esithanda ukurhweba ngabahlalutyi bethu bangaphakathi yiXRP / XLM. Oku kubandakanya iRipple kunye neStellar kwaye inikezela ngamathuba amaninzi esignali ye-crypto ngenxa yeempawu zayo eziguquguqukayo.
Imetrikhi eyongezelelweyo eyongezelelweyo enyanzelekileyo kwisithuba semiqondiso ye-crypto sisikhokelo sentengiso. Ngamanye amagama, ngaba kufuneka uhambe ixesha elide okanye elifutshane kurhwebo? Ngaphandle kolu lwazi, umqondiso we-crypto awuyi kuba naxabiso.
Ukuba isiginali yethu ye-crypto ikuxelela ukuba uhambe ixesha elide, oku kuthetha ukuba sicinga ukuba esi sibini siya kunyuka ngexabiso
Ukuba uphawu lwethu lwe-crypto lukuxelela ukuba uhambe mfutshane, oku kuthetha ukuba sicinga ukuba isibini siza kuncipha kwixabiso
Ukuba isiginali ye-crypto iyakuyalela ukuba uhambe ixesha elide, kuya kufuneka ubeke i-odolo yokuthenga kwi-crypto broker oyikhethileyo
Ukuba, nangona kunjalo, uphawu lwe-crypto lukuxelela ukuba uhambe mfutshane, emva koko kuya kufuneka ukhethe i-odolo yokuthengisa
Iqela lethu labahlalutyi kwi-PipSignals bayonwaba ngokuhamba ixesha elide kwaye lifutshane kwizibini ze-crypto. Ngokubalulekileyo, akukho siqhotyoshelweyo ngokweemvakalelo kwimali yedijithali efanelekileyo esiyithengisayo. Endaweni yoko, eyona njongo yethu iphambili kukwenza inzuzo ngesikhundla.
Sukuyenza impazamo ngayo-eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto iya kuhlala iza nexabiso loku-odola elifunekayo. Ukuba umtsha kurhwebo, ngokubanzi unokhetho ezimbini xa kufikwa ekungeneni kwintengiso.
Ngokuzenzekelayo, uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi bakubuza ukuba uyafuna na ukubeka 'iodolo yentengiso'. Oku kuthetha nje ukuba umrhwebi uza kuqhuba urhwebo lwakho kwangoko-kwixabiso elilandelayo elilandelayo.
Nangona oku kulungile kutyalo-mali lwexesha elide, ayilufanelanga urhwebo lwe-crypto lwexeshana elifutshane. Kungenxa yokuba umngcipheko omkhulu wokungena kurhwebo ngexabiso elithile-ngokophando olwenziweyo olwenziwe.
Umzekelo, masicinge ukuba thina kwiCryptoSignals.org sithengisa i-BTC / i-USD-exabiso layo ngoku li- $ 49,500.
Iqela lethu labahlalutyi abangaphakathi endlwini linokujonga kubuchwephesha kwaye ligqibe kwelokuba iBTC / i-USD yophule i-50,000- emva koko kufuneka kuthathwe indawo ende.
Ukuqinisekisa ukuba singena kuphela kwixabiso elingaphezulu kwe- $ 50,000- kwaye hayi ixabiso langoku le- $ 49,500- kulapho kungena khona i-odolo yomda.
Ngamanye amagama, ukuze urhwebo lwethu lwenziwe nge- $ 50,000- kufuneka senze umda wokuyalela ngeli xabiso. Xa sisenza njalo, umrhwebi wethu uya kuqhuba urhwebo lwethu ukuba kwaye xa i-BTC / iUSD ibetha i- $ 50,000. Kude kube lelo xesha, iodolo yomda ihlala ilindile.
Kuzo zonke iimeko ezimbalwa ezinqabileyo, yonke imiqondiso ye-crypto kwi-CryptoSignals.org iya kuza nexabiso elicetyiswayo loku-odola umda. Okukuphela kwento ekhoyo apha kukuba sibona ithuba lokurhweba ekufuneka lithathelwe amanyathelo ngokukhawuleza ukunqanda ukuphoswa.
Ukuza kuthi ga ngoku, simisele ukuba olona phawu lubalaseleyo lwe-crypto luza kukuxelela ukuba yeyiphi isibini oza kuthengisa, nokuba kuya kufuneka uhambe ixesha elide okanye elifutshane, kwaye leliphi ixabiso lokungena ekufuneka usete kulo umda.
Nangona kunjalo, esi sisiqingatha semfazwe. Emva kwayo yonke loo nto, ukuze urhwebe ngendlela ebeka emngciphekweni, kuya kufuneka ube nesicwangciso sokungena endaweni.
Kwakhona, thina kwiCryptoSignals.org siqinisekisa ukuba unalo lonke ulwazi oludingayo lokufumana inzuzo kwiimpawu zethu zekhompyuter- yiyo loo nto sihlala sikunika ii-odolo zokuyeka kunye nengeniso. Ngokumalunga nelahleko yokumisa, esi sisixhobo solawulo lomngcipheko esiqinisekisa ukuba asilahlekelwa yimali eninzi kurhwebo- ukuba ayizukuya kwisicwangciso.
Oku kubalulekile, nangona sinerekhodi ekudala ikho yokwenza intengiso ye-crypto- asibangi kuphumelela urhwebo ngalunye.
Ngokuchasene noko, kuya kuhlala kukho ukulahleka kwemisebenzi. Ngale nto engqondweni, sicebisa ixabiso elifanelekileyo lokuyeka ukulahleka ekufuneka ulisebenzise xa usenza imiqondiso yethu ye-crypto.
Kumzekelo wesiginali ye-crypto esiyinike ngaphambili, siqaphele ukuba indawo ende kufuneka ibekwe kwi-BTC / USD ngexabiso lokungena le- $ 231.79. Sikwachaze ukuba i-odolo yokuyeka ilahleko kufuneka ibekwe kwi-229.48 yeedola.
Kungenxa yezizathu ezifanelekileyo-njengoko oku kubonisa ilahleko ephezulu ye-1%. Oko kukuthi, ukuba i-BTC / i-USD iye kuthi ngokuchaseneyo nge-1% kwaye emva koko ibethe ixabiso le-229.48 yeedola- i-odolo yokumisa ilahleko iya kungena ngaphakathi. kude nelahleko encinci ye-1%.
Kukho enye into ebaluleke ngakumbi yolwazi eya kuthi ikunike eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto-kwaye elo lixabiso elicetyiswayo lokuthatha inzuzo. Oku kusebenza ngokufanayo nomyalelo wokulahleka kokuyeka, kodwa endaweni yokunciphisa umngcipheko, kuya kufuna ukuvalela inzuzo yethu kurhwebo.
Kumzekelo esiwunike ngaphambili, siqaphele ukuba ixabiso loku-ngenisa inzuzo elicetyiswayo yi- $ 238.74. Oku kuhlala kwi-3% ngaphezulu kwexabiso lokucetyiswa komda we-231.79- oko kuthetha ukuba sifuna ukwenza i-3% kulomqondiso othile we-crypto.
Kwakhona, ukuba ixabiso lokuthatha inzuzo lingqinelana nemarike - i-crypto broker ekuthethwa ngayo iya kuvala ngokuzenzekelayo urhwebo. Kananjalo, sinokutshixa kwiingeniso zethu ngaphandle kokufuna ukuhlala kwisixhobo sethu ukuze siphume ngesandla.
Ukuqhubela phambili ukusuka kweli candelo lingentla malunga nokuyeka-ukulahleka kunye ne-odolo zenzuzo, iqela lethu labahlalutyi ku-CryptoSignals.org liya kuhlala linomngcipheko / umvuzo womvuzo engqondweni xa kuthunyelwa imiqondiso ye-crypto.
Kumzekelo ongentla, umngcipheko wawuyi-1% -kuba lelo xabiso lethu lokuphosa ilahleko lifikelelekile. Inxalenye yomvuzo we-equation yayiyi-3% -ngoko kulapho sibeke khona iodolo yethu yokuthatha inzuzo.
Ngokubalulekileyo, uninzi lweempawu ze-crypto esizithumelayo ziya kulandela i-1/3 yomngcipheko / yomvuzo. Ngamagama alula, oku kuthetha ukuba sibeka emngciphekweni i-1% yenkunzi yethu ukuze sizuze i-3%. Ngokwenza njalo, kufuneka kuphela ukuba sibe nentengiso enye ephumeleleyo kwezi zintathu ukuze senze inzuzo.
Iimpawu zeCrypto zabaQalayo e CryptoSignals.org
01. Qonda iMarike
Ngaba ujonge ukurhweba ngee-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin,
I-Ethereum, kunye ne-Ripple-kodwa banokuqonda okuncinci malunga nendlela esebenza ngayo le marike?
Ukuba kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba abathengisi abanamava bachitha iminyaka befunda ubugcisa bohlalutyo lobuchwephesha. Ithetha ukuba
ukwenza uphando oluphambili kwimilinganiselo yexabiso ledigital currency ngokusebenzisa izalathi ezahlukeneyo. Cinga kwimigca ye-RSI, iMACD, iMilinganiselo yokuHamba, kunye nokunye.
02. Ukufumana iseti yethu yobuchule
Inyani yile-ukuba awunasakhono-seti sokwenza ubuchwephesha
uphando kwinqanaba eliphezulu, uya kusokola ukwenza
uzinzo oluhambelanayo kwishishini lokurhweba nge-crypto. Endaweni yoko, kukho onke amathuba okuba uya kuqhuma nge-akhawunti yakho eseleyo. Kananjalo, oku kukuvumela ukuba urhwebe iimarike zemali yedijithali ngaphandle kokufuna ukubeka nawuphi na umthetho.
Kwelinye icala, kufuneka siqaphele ukuba imiqondiso yethu ye-crypto ayilungelanga ii-newbies kuphela. Ngokuchasene noko, awunakuba nalo ixesha lokuphanda ngeemarike. Kananjalo, iCryptoSignals.org inokunceda abathengisi bazo zonke iiseti zobuchule!
03. Urhwebo neNzuzo
Kulapho iCryptoSignals.org inokunceda khona. Njengoko sicacisa ngakumbi ezantsi, imiqondiso yethu ye-crypto iya kukuxelela
Yonke into oyifunayo kufuneka uyithengise ngendlela enobungozi. Oko kukuthi, wakube ufumene umqondiso kuthi - uyakuyazi ukuba yeyiphi na eyokurhweba ngababini, nokuba kuya kufuneka uhambe ixesha elide okanye elifutshane, kwaye loluphi uhlobo lokungena kunye nexabiso lokuphuma ekujolise kulo.
Yiloo nto abaThengi bethu bayixelela
Andizange ndazi ukuba ndenza ntoni kodwa okoko ndangena kwiqela lasimahla lethegram ngoku ndivule iakhawunti nge professional broker kunye ndinguye ngoku ukulandela ukuthengisa kwiqela le-VIP. Ngoku ndifunda uhlalutyo lobugcisa lwemihla ngemihla kwaye ndilandela i-youtube channel kwaye ubukele zonke iividiyo.
Ndifunde okuninzi malunga ne-crypto okoko ndajoyina i-VIP Telegraph iqela. Pha ngamanqaku emihla ngemihla ndinga funda kwaye emva koko uthengise ukuyibuyisela ulwazi. Ngu i-10 ngaphandle kwe-10 yam.
Ndijoyine iTelegram yasimahla emva koko ndanyuselwa ngokukhawuleza kwiqela le-VIP. Ndilufumana uhlalutyo lobuchwephesha lufundisa kwaye luyandinceda ukuba ndifunde ngakumbi malunga ne-cryptocurrency kunye nendlela yokuthengisa ngayo.
Imiqondiso ebonelelweyo kulula kakhulu ukuyilandela.
SITHUMELA UKUHLAZIYA NGOKUGQIBELELEYO KWEZOBUCHWEPHESHE NGAYO YONKE IMIQATHANGO YOKWENZA, BONA IMIZEKELO YABASEBENZI BAKHO NGEZANTSI!
Abarhwebi bethu baFunyenwe kuMgangatho woRhwebo oSekwe kwihlabathi liphela!
Ungazibandakanya nesimahla Iqela leVIP apha ngezantsi ngonqakrazo lweqhosha ukubona imizekelo yentengiso yethu.
Ayisiyiyo kuphela into ekufuneka ufumane eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto ekhoyo kwintengiso- kodwa kunye nomrhwebi ophambili ukubeka iiodolo ezifunekayo. Emva kwayo yonke loo nto, ngaphandle komrhwebi olungileyo ecaleni kwakho, ngekhe ukwazi ukufikelela kwindawo yentengiso ye-crypto.
Ngaphambi kokuba ujonge kwimirhumo nakwiikhomishini, kubalulekile ukuba usebenzise imiqondiso ye-crypto yakho ngomrhwebi olawulwayo nothembekileyo. Ngelishwa, uninzi lwendawo yokuthengisa ye-crypto isebenza ngaphandle kwelayisensi yokulawula-eyingxaki kakhulu. Ukubeka ngokulula, oku kuthetha ukuba umrhwebi akadingi kuphendula kumzimba wezemali nangaluphi na uhlobo-ke izinto ezinje ngokhathalelo lwabathengi kunye nokukhuselwa kwabatyalomali kuhlala kungabikho. Ukukunceda ukukhomba kwicala elifanelekileyo - abanye babalawuli abaphambili kwesi sithuba baquka i-FCA (UK) i-SEC (i-US), i-ASIC (i-Australia) kunye ne-CySEC (eCyprus). ...
IiKhomishini kunye nokusasazeka
Njengoko eminye imiqondiso yethu ye-crypto ijolise ekuzuzeni ngokukhawuleza nangokuzithoba, kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe umthengisi onika iikhomishini ezisezantsi kunye nokusasazeka okuqinileyo. Ngokumalunga neyokuqala, baninzi abathengisi be-crypto abasebenza kwisithuba esikuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekomishini. Oku kuthetha ukuba umrhumo kuphela oza kuwuhlawula uza ngokusasazeka.
Ayingawo onke amalungu ethu kwiqela leCryptoSignals VIP Telegram elinemali enkulu yokurhweba nayo. Ukuba oku kuvakala ngathi, oku akuthethi ukuba awukwazi ukwenza impumelelo kwimiqondiso yethu. Ngokuchasene noko, ngokusebenzisa i-crypto broker enikezela ngembuyekezo, uya kuba nakho ukurhweba ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Isixa sokufumana onokufumana siya kuxhomekeka kwizinto ezininzi-ezinje ngomthengisi ekubhekiswa kuye kunye nelizwe ohlala kulo.
Kungenxa yokuba umrhwebi wakho omkhethileyo ebonelela ngeemarike zedijithali zemali, oku akuthethi ukuba kuya kulungela imiqondiso yethu ye-crypto. Emva kwayo yonke loo nto, iqela lethu labahlalutyi bangaphakathi bathanda ukuthatha indlela eyahlukeneyo kwezorhwebo- oko kuthetha ukuba bajolise kwizibini ze-crypto zazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Umzekelo, umqondiso omnye unokuhambelana ne-BTC / USD ngelixa elilandelayo linokujonga inzuzo kwi-ETH / XRP! Ngale nto engqondweni, kungcono usebenzise i-crypto broker enika iimfumba zeemarike-ezigubungela zombini i-crypto-to-fiat kunye ne-crypto-to-crypto pair.
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi wakho we-crypto okhethiweyo unikezela ngendlela oyikhethileyo yokuhlawula. Awona maqonga asithandayo ukusebenzisa i-debit / ikhadi lekhredithi kunye needipozithi ze-e-wallet. Oku kukuvumela ukuba uxhase ngokukhawuleza iakhawunti yakho kwaye kwiimeko ezininzi- simahla. Unokufuna ukunqanda amaqonga amkela kuphela iintlawulo zebhanki. Kungenxa yokuba kunokuthatha iintsuku ezimbalwa ukuba imali ifike.
Iyatsho ukuba iBitcoin yeyona ndawo ithengiswa kakhulu kule marike. Kananjalo, abathengisi bethu baya kuhlala bejonga inzuzo kule klasi yeaseti engamanzi kakhulu. Ngelixa kwiimeko ezininzi siya kuthumela imiqondiso yethu yokurhweba ngeBitcoin kwi-BTC / i-USD-sikwagubungela ngababini be-crypto-to-crypto. Umzekelo, ukuba abaphandi bethu ngaphakathi bacinga ukuba i-BTC igqithile kwi-ETH-siya kuthumela umqondiso wokurhweba weBitcoin ngeziphumo zethu. Ukukunika umbono wokuba ezona mpawu zintengiso zeBitcoin zisebenza njani apha ku-CryptoSignals.org- jonga umzekelo ongezantsi. Ngababini: Umyalelo we-BTC / we-USD: Sho ...
Usenokuba uqaphele ukuba eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto ekhoyo kwimarike iyafikeleleka kwiqela leTelegram. Kungenxa yokuba uya kufumana imiqondiso esemgangathweni ye-crypto ngexesha-lokwenyani- okuthetha ukuba ngekhe uphinde uliphose ithuba lokwenza inzuzo kwakhona! Olona phawu lubalaseleyo lwamaqela e-Telegraph ama-crypto anamawaka amalungu asebenzayo. Oku kukuvumela kunye namanye amalungu ukuba nixoxe ngezimvo zorhwebo nge-crypto ngokusebenzisa iapp. Olona phawu lubalaseleyo lwamaqela e-Telegraph e-crypto nawo eza nenkxaso yexesha langempela kubathengi. Okubaluleke ngakumbi kukuba, ngokufumana imiqondiso esemgangathweni ngeTelegram- eyona projekthi ...
Ngaphambi kokuba ujonge kwimirhumo nakwiikhomishini, kubalulekile ukuba usebenzise imiqondiso ye-crypto yakho ngomrhwebi olawulwayo nothembekileyo.
Ngelishwa, uninzi lwendawo yokuthengisa ye-crypto isebenza ngaphandle kwelayisensi yokulawula-eyingxaki kakhulu.
Ukubeka ngokulula, oku kuthetha ukuba umrhwebi akadingi kuphendula kumzimba wezemali nangaluphi na uhlobo-ke izinto ezinje ngokhathalelo lwabathengi kunye nokukhuselwa kwabatyalomali kuhlala kungabikho.
Ukukunceda ukukhomba kwicala elifanelekileyo - abanye babalawuli abaphambili kwesi sithuba babandakanya i-FCA (UK) i-SEC (i-US), i-ASIC (i-Australia) kunye neCySEC (eCyprus).
Njengoko eminye imiqondiso yethu ye-crypto ijolise ekuzuzeni ngokukhawuleza nangokuzithoba, kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe umrhwebi onika iikhomishini ezisezantsi kunye nokusasazeka okuqinileyo.
Ngokumalunga neyokuqala, baninzi abathengisi be-crypto abasebenza kwindawo ekuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekomishini. Oku kuthetha ukuba umrhumo kuphela oza kuwuhlawula uza ngokusasazeka.
Kungenxa yokuba umrhwebi wakho omkhethileyo ebonelela ngeemarike zedijithali zemali, oku akuthethi ukuba kuya kulungela imiqondiso yethu ye-crypto.
Emva kwayo yonke loo nto, iqela lethu labahlalutyi abangaphakathi endlwini bathanda ukuthatha indlela eyahlukeneyo kwezorhwebo- oko kuthetha ukuba bajolise kwizibini ze-crypto zazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Umzekelo, umqondiso omnye unokuhambelana ne-BTC / USD ngelixa elilandelayo linokujonga inzuzo kwi-ETH / XRP!
Ngale nto engqondweni, kungcono usebenzise i-crypto broker enika iimfumba zeemarike-ezigubungela zombini i-crypto-to-fiat kunye ne-crypto-to-crypto pair.
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi wakho we-crypto okhethiweyo unikezela ngendlela oyikhethileyo yokuhlawula. Awona maqonga asithandayo ukusebenzisa i-debit / ikhadi lekhredithi kunye needipozithi ze-e-wallet. Oku kukuvumela ukuba uxhase ngokukhawuleza iakhawunti yakho kwaye kwiimeko ezininzi- simahla.
Unokufuna ukunqanda amaqonga amkela kuphela iintlawulo zebhanki. Kungenxa yokuba kunokuthatha iintsuku ezimbalwa ukuba imali ifike.
Ithi iBitcoin yeyona ndawo kuthengiswa kakhulu kuyo kule marike. Kananjalo, abathengisi bethu baya kuhlala bejonga inzuzo kule klasi yeaseti engamanzi kakhulu.
Ngelixa kwiimeko ezininzi siya kuthumela imiqondiso yethu yokurhweba ngeBitcoin kwi-BTC / i-USD-sikwagubungela ngababini be-crypto-to-crypto. Umzekelo, ukuba abaphandi bethu ngaphakathi bacinga ukuba i-BTC igqithile kwi-ETH-siya kuthumela umqondiso wokuthengisa weBitcoin ngeziphumo zethu.
Ukukunika umbono wokuba ezona mpawu zintengiso zeBitcoin zisebenza njani apha ku-CryptoSignals.org- jonga umzekelo ongezantsi.
Ngababini: BTC / USD
Umda: $ 61,500
Ukuyeka-Ukuphulukana: $ 62,000
Thatha iNzuzo: $ 57,000
Isiphakamiso sesibonakaliso seBitcoin ngasentla sibonisa ukuba abathengisi bethu ngaphakathi kwindlu bakholelwa ukuba i-BTC / USD iya kuncipha kwiiyure ezizayo. Kodwa, asifuni ukungena kwintengiso ngaphandle kokuba isibini sihlasela indawo yethu oyithandayo- kulo mzekelo yi- $ 61,500.
Ukuqinisekisa ukuba sikhuselwe kwimeko yokuqhubekeka nokunyuka, isindululo seempawu zeBitcoin sikwacebisa ngexabiso lokuyeka ukulahleka kwe- $ 62,000.
Le yinto esihlala siyibonelela xa sisasaza imiqondiso yethu yeBitcoin esemgangathweni- njengoko sisazi kakuhle urhwebo oluchasene nomngcipheko. Iimpawu zethu zokurhweba zeBitcoin zikwanayo nemiyalelo yokuthatha inzuzo. Ukuba ikhutshiwe, oku kuyokutshixa ngokuzenzekelayo kwiingeniso zakho kwi-crypto broker oyikhethileyo.
Iimpawu zeNtengiso zeBitcoin zasimahla
Ngaba ukurhwebo lweempawu zamahhala zeBitcoin? Ukuba kunjalo, thina kwi-CryptoSignals.org sinikezela ngenkonzo yasimahla ye-Bitcoin eneziphakamiso ezintathu zokuthengisa ngeveki. Ngokungafaniyo nabaninzi abakhuphisana nathi- asikuceli ukuba ubhatale imali eyongezelelweyo ukuveza umda wokuyalela okanye ixabiso lokulahleka.
Ngokuchasene noko, uyakufumana lonke ulwazi esixoxe ngalo ngentla- ke esi sisibini seBitcoin, indawo ende okanye emfutshane, kunye nomda, ukulahleka kokuyeka, kunye namaxabiso enzuzo.
Isizathu sokuba sinikeze imiqondiso yokuthengisa yasimahla yeBitcoin kukuba oku kuvumela amalungu amatsha ukuba avavanye inkonzo yethu ngaphambi kokuzibophelela. Ngokusesikweni, konke okufuneka ukwenze ukuze ufumane imiqondiso yethu yasimahla yeBitcoin ukubhalisa iakhawunti nathi apha kwiCryptoSignals.org.
Awudingi ukufaka nayiphi na imali ukuze ufikelele kwiimpawu zethu zokurhweba zasimahla ze-crypto. Endaweni yokuba ubhalise-ungaya ngqo kwiqela lethu lesiginali yasimahla!
Usenokuba uqaphele ukuba eyona miqondiso ilungileyo ye-crypto ekhoyo kwimarike iyafikeleleka kwiqela leTelegram. Kungenxa yokuba uya kufumana imiqondiso esemgangathweni ye-crypto ngexesha-lokwenyani- okuthetha ukuba ngekhe uphinde uliphose ithuba lokwenza inzuzo kwakhona!
Olona phawu lubalaseleyo lwamaqela e-Telegraph ama-crypto anamawaka amalungu asebenzayo.
Oku kukuvumela kunye namanye amalungu ukuba nixoxe ngezimvo zorhwebo nge-crypto ngokusebenzisa iapp.
Olona phawu lubalaseleyo lwamaqela e-Telegraph e-crypto nawo eza nenkxaso yexesha langempela kubathengi.
Okubaluleke ngakumbi kukuba, ngokufumana imiqondiso esemgangathweni ngeTelegram - ababoneleli ababalaseleyo kwesi sithuba baya kuthi kwakhona bancamathisela igrafu okanye itshathi kwisindululo ngasinye.
Ngamanye amagama, ezona zimpawu zibalaseleyo ze-crypto amaqela eTelegram akuvumela ukuba uzuze kwaye ufunde ngexesha elinye.
Ngaphambi kokuba uqalise ngeyona miqondiso ilungileyo yeqela leTelegram oyikhethile- singacebisa ukuseta isaziso esisesikweni. Ngokuqinisekisa ukuba esi saziso sesandi siyingqayizivele kwiqela lakho le-Telegraph ye-crypto-uya kwazi ukuvula i-app kwangoko ukuze ubeke ii-odolo ezicetyiswayo.
Iqela lasimahla leCrypto Signals Telegraph
Abanye benu banokufuna ukuzama imiqondiso yethu ye-crypto esemgangathweni ngaphambi kokuba baphuculwe kwisicwangciso sepremiyamu. Ukuba kunjalo, ungavuya ukwazi ukuba sikwabonelela ngeqela lasimahla leempawu zekhompyuter ze-crypto. Nje ukuba ujoyine ijelo lethu elihlala likhula leTelegram- uya kufumana i-3 x yemiqondiso yasimahla ye-crypto ngeveki.
Oku kunokugubungela ngababini i-crypto-to-crypto njenge-BTC / EUR, BTC / USD, okanye i-ETH / USD. Ngamanye amaxesha, ezinye zeempawu zethu zasimahla ze-crypto ziya kugubungela izibini ezineeasethi ezimbini zedijithali. Umzekelo, sihlala sithumela imiqondiso yethu yasimahla ye-crypto kwi-BTC / ETH, BTC / XRP, kunye ne-ETH / LTC.
Nje ukuba ufumane isignali yasimahla ye-crypto ngeqela lethu leTelegram- konke okufuneka ukwenze kukuya ngqo kumthengisi okhethiweyo kwaye ubeke iiodolo ezicetyisiweyo. Ngapha koko, ukuba ungumrhwebi onobuqili- uya kuthi uthathe isigqibo sokusivavanya ngeakhawunti yedemo yomrhwebi yasimahla.
Ngokwenza njalo-awudingi ukubeka emngciphekweni ipeni enye kwiimpawu zethu zasimahla ze-crypto. Endaweni yoko uya kube ubeka iiodolo zethu ezicetyiswayo 'ngemali yephepha'. Emva kokuba indawo nganye yesiginali ivaliwe-ungabhala phantsi iziphumo zesikhundla.
Umzekelo, ukuba senze iipips ezingama-25 kwisiginali ye-crypto yasimahla, qiniseka ukwenza inqaku loku. Ekupheleni kwetyala lakho - ukuba ufumanisa ukuba imiqondiso yethu yasimahla ye-crypto ihlangabezane nolindelo lwakho- unokucinga ngokunyusa isicwangciso sepremiyamu. Ngokwenza njalo, uya kufumana imiqondiso ye-premium ye-3-5 yonke imihla!
YINTONI EBANDAKANYISIWE KWI-VIP YETHU CRYPTO SIGNAL IQELA LEENKULUNKULU
Joyina amalungu ethu angama-10,000 + avela kwihlabathi lonke abaye bafumana inzuzo evela kuthi Iimpawu zeVIP Crypto kwaye babe ngabarhwebi abaqeqeshiweyo.
2-3Iimpawu zeCrypto uSuku
10k +Amalungu eTelegram
Ngaba ukulungele ukuba
UMRhwebi weCrypto ophumeleleyo?
ICryptoSignals.org liqela labarhwebi abaqeqeshwe kakhulu abathe bathengisa kwimarike ye-cryptocurrency ukusukela ngo-2014, sagqiba kwelokuba senze uluntu yocingo ukuze abanye bafunde kwiimpawu zethu ezichanekileyo zedijithali.
SITELELE KWIINKCUKACHA ZENTLALO
Ezona zibonakaliso zasimahla zeCrypto Meyi 2022 kunye neNdaba zeCrypto
I-Fort Street, iNdlu yaseArtemis,
eGrand Cayman, KY1-1111,
Ifowuni © 2022 CRYPTOSIGNALS.ORG. BONKE ABALUNGILEYO.
Ulwazi olukwiwebhusayithi ye-cryptosignals.org nangaphakathi kweqela lethu leTelegram yenzelwe iinjongo zemfundo kwaye ayifanele ithathwe njengengcebiso yotyalo-mali. Ukurhweba kwiimarike zezemali kunomngcipheko ophezulu kwaye kusenokungafaneleki kubo bonke abatyali-mali. I-Cryptosignals.org ayithathi xanduva ngelahleko eyenzeke ngenxa yomxholo onikwe ngaphakathi kumaqela ethu eTelegram.
Iqela le-Crypto Signals alize liqhagamshelane nawe ngokuthe ngqo kwaye ungaze ucele intlawulo. Sinxibelelana nabathengi bethu nge [imeyile ikhuselwe] Sinetshaneli enye kuphela yeTelegram yasimahla enokufumaneka kwindawo. Iqela leVIP liyafumaneka emva kokuthenga umrhumo. Ukuba ufumana nayiphi na imiyalezo evela nakubani na, nceda uyixele kwaye ungenzi naziphi na iintlawulo. Oku akusiyo i-Crypto Signals Team